Pantiesmpanamboatra sy mpamatsy | Wanzhanxing Apparel
WZX Seamless Underwear Factory / Shapewear Manufacturer Support OEM / ODM / Ambongadiny ambany MOQ Oder. Accpet Custom Private Label / Logo.
Akanjo Slip Maternity
Leggings natao manokana
Akanjo tsy misy trace
an-trano > Products > Fitafiana isan'andro > Panties
Ny famokarana atin'akanjo WZX dia manohana ny vehivavy tsy misy seam's panties, lehilahy's atin`akanjo, ankizy's atin`akanjo, malefaka andilany ambony panties, sexy ambany andilany briefs, bikini briefs, koa, ny seamless atin`akanjo orinasa dia afaka OEM/ODM breathability belangy panties, leoparda pirinty pataloha, fehy-loko briefs, mafana ankizivavy panties, sariitatra mahafatifaty atin`akanjo ankizy, miampy habe panties maternity, boyshorts sns.
WZX mpanamboatra atin'akanjo seamless koa ny vehivavy ambongadiny'Amin'ny mpamatsy panties, ny orinasanay dia afaka manome atin'akanjo tsara kalitao ary mametraka ny mari-pamantaranao manokana amin'ireo panties tsy misy dikany ireo.
WZX Customized Fe Slimmer Shorts Factory Cutom-Made
Spandex sy lamba mihinjitra efatra, ireo short fanazaran-tena avo lenta ireo dia hivezivezy miaraka aminao amin'ny hetsika ara-batana rehetra, ao anatin'izany ny fanatanjahan-tena, ny fandehanana mandeha, na ny fialan-tsasatra ao an-trano. horonana na mihady. Tsy mihodinkodina rehefa miforitra sy mihinjitra.
Akanjo anaty fehin-kibo WZX Vehivavy Mahazo aina Mid Waist Brief Vehivavy Mifoka Sifotra
Akanjo atin'akanjo vehivavy miloko mibaribary tsy misy seamless Hipster malefaka fehin-tenda Salôlôlôlôla vehivavy Mid Rise BikiniNy atin'ny vehivavy miaraka amin'ny crotch malalaka mifoka rivotra ho fiarovana fanampiny, mampangotraka ny hatsembohana, mifoka rivotra ary mahasalama.Paty fohy fandrakofana feno, mety ho an'ny c-section postpartum sy fandidiana kibo. Mora esorina sy mora esorina ny kiraro, tsy tery loatra na mivaha fa mahazo aina fotsiny. Safidy tsara ho an'ny karazana briefs "granny panty". Sasao tsara amin'ny fiketrahana kely kokoa. Ny atin'akanjo ho an'ny vehivavy dia manome fahatsapana mampitony tsara miaraka amin'ny vombony malalaka mifoka rivotra mba ho fiarovana fanampiny, hatsembohana, fofonaina ary mahasalama. Ny safidy loko maro dia mitondra fifaliana betsaka amin'ny fiainanao andavanandro. Mety amin'ny trano, ny ora hatoriana, ary ny fampiasana andavanandro.
WZX Seamless Gradient Hi Cut Panty Factory namboarina manokana
Fitaovam-behivavy landihazo mirindra malefaka Hipster Panties Vehivavy Mid Rise BikiniAmpiasao ny teknolojia fanapahana tokana efa mandroso indrindra, zaitra kely kokoa, lafo kokoa, mitondra fandrakofana tsara kokoa, avelao ho tonga lafatra amin'ny fotoana rehetra ny panties landihazo mirindra. Ny atin'akanjo tsy hita maso tsy hita maso dia mety tsara ho an'ny fanaovana fanatanjahan-tena, fanazaran-tena, yoga, legging, pataloha jeans, akanjo, zipo, na hetsika ofisialy. Azontsika sary an-tsaina hoe tsara tarehy ianao miaraka amin'ny atin'akanjo vita amin'ny landihazo mirindra eo amin'ny vatanao. Tsy mihady hoditra na mihinjitra koa ireo paty ireo. Ny tsipika seam dia malama ary tsy mahasosotra. Mahazo aina ny mitafy ary mijanona mandritra ny andro.
Panties Boyshort an'ny vehivavy WZX Seamless Nylon Underwear Stretch Boxer Briefs
Akanjo tsy misy seam-behivavy Boyshort Ladies Panties Spandex Panty Workout Boxer briefsNy panties tsy misy seam ho an'ny vehivavy dia vita amin'ny spandex sy nylon. Maivana sy mifoka rivotra ilay fitaovana ary toa tsy mitafy na inona na inona mihitsy ianao. Izay hahatonga anao hahatsiaro tena mangatsiaka amin'ny fahavaratra. Ny fonon'ny landihazo 100% dia tena malefaka sy mahamay. Afaka miaro ny fiainanao manokana izy ireo ary mitazona anao ho vaovao mandritra ny andro. Izy io dia manana endrika lamaody manjaitra loko miloko. Rehefa manao ny atin'akanjo ankizilahy miaraka amin'ny pataloha jeans ianao, dia manome fampiononana tsara indrindra koa izy ireo nefa tsy manakenda ny fenao.
WZX Womens Bikini Panties Seamless Underwear Soft Smooth Hipster Briefs
Panties Hipster tsy hita maso an'ny vehivavy sarona feno fehin-kibo mpanamboatra OEM ODMNy lamba harato faran'izay malefaka dia mitondra fikorianan'ny rivotra bebe kokoa ary manamaivana ny endriky ny cellulite eo amin'ny andilanao sy ny lamosinao. Safidy tsara amin'ny fahavaratra. Mangatsiaka ny ambany sy ny feny. Ny gusset crotch landihazo madio dia miaro ny faritra manokana ary mitazona azy ho mangatsiaka. Ny lamba elastika avo dia mandrakotra ny kibo, ny fehin-tongotra ary ny fehin-tongotrao. Ny famolavolana thong tsy manam-paharoa dia mampiakatra kely ny ambany anao. Ny atin'akanjo hipster tsy misy seam dia manampy anao amin'ny fananganana ny bikan'ny vatanao sy ny fijery manaitra.
WZX Girls' Seamless Underwear Boxer Beyondsoft Panties Custom Pattern
Tombontsoa mahasambatra ho an'ny vehivavy tsy mirindraShapewear Brief ManufacturerNy panties tsy misy seam ho an'ny vehivavy dia mamolavola lamina isan-karazany voatenona amin'ny kofehy miloko, avelao ho mora kokoa ny miatrika ny fiainana andavanandro na ny asa. manana milina SAMTONY 12 inch -19 inch izahay amin'ny habe samihafa araka izay ilainao, ny modely fanohanana namboarina ihany koa. Te-hanome safidy loko bebe kokoa ho anao izahay ho an'ny fitafy isan'andro, mifanandrify haingana ho anao ny akanjo miloko isan-karazany, ataovy azo antoka fa manao atin'akanjo tsy hita maso ho an'ny asa, ora mahafaly, fiainana an-trano, alina mampiaraka na akanjo lava lava, mitazona anao mandritra ny andro.& faly. Azafady, sasao amin'ny milina na sasana amin'ny tanana amin'ny rano mangatsiaka, loko maizina misaraka, arotsaka ambany, aza asiana vy, aza bleach. Mba tsy hihena dia ahantona amin'ny maina na asio maina ambany.
WZX Womens Seamless Hipster Panties Mihinjitra Mifoka Tsy Aseho Bikini atin'akanjo
Akanjo an'ny vehivavy miampy habe mifoka rongony mampahazo aina tsara mirindra hipsterVita amin'ny lamba vita amin'ny rivotra avo lenta miaraka amin'ny Nylon sy Spandex mba hanome ny panties hipstery tsy misy seam miaraka amin'ny famotsorana ny hamandoana mahagaga, malefaka sy malefaka mba hitazonana anao ho maina sy mahazo aina mandritra ny andro, mankafy ny andro fampiononana. Ny panties hipster tsy misy seam dia nampiasa landihazo 100% premium. Panties tsy misy fisehoana tsy hita maso miaraka amin'ny crotch malalaka mivelatra ho fiarovana fanampiny, fofonaina ary mahasalama. Tsy misy mitaingina amin'ny karazana hetsika rehetra. Mety amin'ny trano, ny torimaso, ary ny fampiasana andavanandro.
Kitapom-behivavy WZX landihazo tsy misy sempotra mifofotra silipom-behivavy Hipster Brief tsy misy palitao volondavenona
Panties Bikini Brief Hipster Seamless Classic Seamless Classic vehivavyFanorenana vaovao nohamafisina ho an'ny fampiononana maharitra sy faharetana ho an'ireo atin'akanjo bikini mid-rise mirindra tsara. Ny fametahana marika tsy misy marika ary tsy misy endrika seam dia manafoana ny fihenjanana ary manamaivana ny tsipika panty tsy misy fisehoana, manasongadina fandrakofana feno amin'ny mid-rise. Maina haingana, Sasao amin'ny Diabe miaraka amin'ireto ary akanjo ara-panatanjahantena mahavelona, ​​miantoka ny fanamainana haingana tonga lafatra amin'ny fiasana, ny dia ary ny fomba fiaina mavitrika.
WZX vehivavy feno fandrakofana vehivavy Plus habe Panties OEM ODM mpanamboatra fohy
Fitaovam-behivavy Sarona feno landihazo malemilemy Andilany avo mifofotra Loko mivaingana Panties ho an'ny vehivavyIreo atin'akanjo ho an'ny vehivavy ireo dia vita amin'ny landihazo premium faran'izay malefaka sy malefaka. Ny tsipika seam-paty nohamafisin'ny hipster dia malama amin'ny fikasihana ary miendrika tsara ary mivelatra tsara. Tsy misy fikoropahana, tsy misy fatorana, na pilling. Ny atin'akanjo ho an'ny vehivavy dia manome endrika mendri-piderana miaraka amin'ny fandrakofana aina eo ambanin'ny akanjo rehetra. Manana fandrakofana feno ny lamosinao izy ireo ary tsy misy mitaingina na mihodinkodina midina, Akora mifoka rivotra tsara ho an'ny fanazaran-tena, ary tsy misy tsipika hita eo ambanin'ny pataloha tery. Ireo atin'akanjo tsy misy seam dia mamihina ny hoditrao mba hampisehoana tsara ny fiolahanao kanto sy sexy.
Akanjo atin'akanjo Spandex vehivavy WZX High Waist Sarona feno Panties Vehivavy
Vehivavy Mid Waist Tsy misy Muffin Top Sarona feno Famintinana Ladies Lingerie Underwear ambongadiny Panties SeamlessNy atin'akanjo fohy ho an'ny vehivavy dia manome endrika mandrobo miaraka amin'ny fandrakofana aina eo ambanin'ny akanjo rehetra. Ny atin'akanjonay dia tena miasa ary azonao atao miaraka amin'ny zipo, ary koa ny akanjonao mirehitra, pataloha jeans avo. Fehin-damba mifono lamba DOUBLE-LAYER malefaka malefaka dia mipetraka eo amin'ny andilana. Tsy mihodinkodina na mivondrona, tsy misy faneriterena fa milamina tsara. Ny atin'akanjo avo lenta dia manome fanohanan'ny kibo antonony ary mampihena ny endriky ny top muffin.
WZX Women's Shapewear Seamless Hi-Waist Brief Butt Lifter Shapewear Slim Waist Trainer
Fehifohy fohy mifoka rivotra ho an'ny vehivavy miaraka amin'ny fampiononana mangatsiakaNy seamless high waist shapewear panties ho an'ny vehivavy tummy control dia hamolavola tsara ny andilanao, mety ho an'ny vehivavy rehetra te-hijanona amin'ny endrika, toy ny vehivavy birao, reny postpartum, na izay te hanary ny tavy kibo. Ireo panties shapewear ireo dia manasongadina endrika endrika tapaka fohy mirindra mba hahazoana antoka fa samy mahazo aina sy azo ampiasaina amin'ny akanjo rehetra izy ireo.
WZX Tie-Dye ambany andilany malefaka mifoka rongony vehivavy fohy Hipster Panties Thong ho an'ny vehivavy
Thongs ho an'ny vehivavy Seamless No Show Thong, Spandex Nylon atin'akanjo fohy ambongadinyIreo atin'akanjo ho an'ny vehivavy dia elastika avo ary mitazona endrika. Lamba miendrika efatra misy nylon sy spandex. Side seamless thong atin`akanjo ho an`ny vehivavy dia midika hoe tsy misy lafiny seams& tag-maimaim-poana mba hisorohana ny panty tsipika ambanin'ny akanjo toy ny mahia pataloha jeans, yoga pataloha, fanatanjahan-tena legging& lobaka/akanjo. Tsara ho an'ny fanazaran-tena, mahafeno ny filanao isan'andro. Thong vehivavy Spandex tsy misy crotch landihazo. Sexy tanga ho an'ny vehivavy miaraka amin'ny fandrakofana lamosina faran'izay kely nefa mamolavola manokana fandrakofana feno tsara eo anoloana. Mifoka rivotra be tsy misy lamba fanampiny eo amin'ny faritry ny crotch mba tsy hivezivezy amin'ny sisiny.
Anarana: Carey Zhang
TSARA TSARA ARA-KARENA
Wanzhanxing Apparel CO. LTD., 50 metatra any andrefan'ny Provincial Road 237, Tongyu Town, Chaoyang District, Shantou City